Izakhelo zePowerPoint zobuNgcali: Ezona templates ziBalaseleyo zoBuchule | Abadali be-Intanethi
Kukho iinkqubo ezenza kube lula kuwe ukwenza iintetho ze-intanethi, ezifana nePowerPoint. Kwizavenge ezidlulileyo, siye sangena kwihlabathi lale nkqubo encede abafundi kakhulu. Kwesi savenge sitsha, besifuna ukwenza umsebenzi wakho ube lula ngakumbi kwaye siza kukubonisa ezona templates zobuchule bePowerPoint ukuza kuthi ga ngoku.
Ngoko ke, Siza kucebisa amanye amaphepha ewebhu okanye izicelo apho unokufumana khona ezinye zeetemplates ezilungileyo ukuze iiprojekthi zakho zingaphawulwa kwiinkcazo zakho. Asifuni kukwenza ukuba ulinde kwakhona, siyaqala.
1 Awona maphepha ewebhu angcono
1.1 Izakhelo zeOfisi
1.3 Izilayidi zeCarnival
1.4 Iitemplate zamahala zePowerPoint
1.6 Izakhelo Zoncumo
Awona maphepha ewebhu angcono
Umthombo: iOfisi 365
Ngezifanekiso zeOfisi, amathuba okufumana ezona templates zibalaseleyo zePowerPoint ziyenyuka. Eli phepha lewebhu isebenzisa uthotho lweetemplates ezinokusetyenziswa kwaye zicinywe amaxesha amaninzi njengoko ufuna kwaye nanini na ufuna. Kwakhona, ukuba ufuna iitemplates ezinesitayile sobuchule ngakumbi, kufuneka ucofe iqhosha lokukhangela kwaye uya kufumana imixholo emitsha engapheliyo.
Asikuphela nje ukufumana iitemplates zeenkcazo zakho, kodwa kuyenzeka ukuba wenze iikhalenda, ii-ajenda, iincwadana kunye nokunye okuninzi. Ngamafutshane, yiwebhusayithi egqibeleleyo yeeprojekthi ezigqibeleleyo.
IShoweet lelinye lamaphepha ewebhu amaninzi akhoyo kwaye apho unokufumana khona ezinye zeetemplates ezilungileyo. Eyona nto iphambili yale webhusayithi kukuba ibonelela ngoluhlu olubanzi lomxholo, okwenza kube lula ukufumana ezinye iitemplates ezihambelana nesimbo sakho somsebenzi okanye iiprojekthi zakho ngokuchanekileyo.
Ezinye zezi templates aziyi kukusebenzela kuphela ukwenza iintetho, kodwa kuyenzeka ukuba umise ngesandla iitemplates kuyilo lokuphinda, imizobo, iimephu, okanye ishishini okanye amakhadi entetho. Ukuqukumbela, yonke into esikushwankathele yona yiyo yonke into oyifunayo ukuqala.
Umthombo: ICarnival yeZilayidi
Ithathwa njengewebhusayithi apho eyona nto iphambili kukukwazi ukufumana ezo templates ofuna ukuzisebenzisa emsebenzini wakho. Ukwenza oku, nganye kuzo yahlulahlulwe ngokweendidi ezahlukeneyo kunye neecandelwana.
Zixhaphake kakhulu ukufumana imihla efana neKrisimesi okanye iiprojekthi ezinobunzima kunye nobungcali. Ukuba le nto uyifunayo kukumangalisa abaphulaphuli bakho, Udinga nje ukungena kweli phepha kwaye uya kufumana yonke into oyifunayo ukwenza iinkcazo-ntetho zakho kwi-10 ephezulu.
Iitemplate zamahala zePowerPoint
Ngeetemplates zePowerPoint zasimahla awusenaso isizathu sokuba iiprojekthi zakho kunye neenkcazo-ntetho zingayilwa ngokugqibeleleyo. Eyona nto ibonakalisa le webhusayithi lujongano olubanzi enalo. Ukusukela nje ukuba sifikelele kuyo, sinokufumana uluhlu olubanzi lweendidi apho sinokulahleka kwaye sikwazi ukuzama phakathi kweenketho zayo ezininzi.
Imixholo eyona ifanelekileyo kweli phepha ngokungathandabuzekiyo: ukuhamba, ukutya okanye iitemplates ezinxulumene nehlabathi lesayensi. Ukongeza, ikwanodidi olukhulu lweetemplate ezincinci kunye neengcali eziya kwenza intetho yakho ibe nomtsalane ngakumbi.
Umthombo: I-Arhente yeNtengiso yeDijithali
Ukuba into oyifunayo kukubaleka kumxholo weenkcazo-ntetho kwaye uye kumyalezo ocacileyo nothe ngqo. Esi sisixhobo esifanelekileyo sayo, kunye neHubspot, unokwenza i-infographics egqibeleleyo eya kushwankathela umsebenzi wakho ngendlela emfutshane kwaye kulula ukwetyisa.
Ukongeza, nganye yezi templates inokwenziwa ngokwezifiso ngokupheleleyo okanye iyahleleka, nto leyo ethetha ukuba ungazihombisa ngendlela othanda ngayo kwaye uzame phakathi kwemibala eyahlukeneyo kunye neefonti ezahlukeneyo. Ngamafutshane, yiwebhusayithi egqibeleleyo ukuqala ukuzazisa kwihlabathi le-infographics ngendlela elula kakhulu.
Iitemplates zoncumo lukhetho lokugqibela lwale ncinci kwaye kwangaxeshanye, uluhlu olude. Ngale webhusayithi unokufumana iitemplates zemixholo eyahlukeneyo. Ukongeza, ineetemplates ezifanelekileyo kwiMicrosoft kunye neGoogle, eququzelela indlela yokusebenza.
Into ephawula eli phepha kukuba ithempleyithi nganye ekhoyo ijolise ngokukodwa kumacandelo angakumbi ochwephesha. Yiyo loo nto mhlawumbi iliphepha ubulikhangela. Kufuneka kwakhona kongezwe ukuba nangona sikhankanyile ukuba ineetemplates zobuchwephesha, ikwanakho nokuba nokwenzeka kokuyilawula kunye nokuzihlela ngendlela esiyithandayo.
Njengoko ukwazile ukuqinisekisa, kukho amaphepha ewebhu amaninzi akhoyo kwaye ke ngoko, kunokwenzeka ukukhuphela kwaye ufumane iitemplate zazo zonke iintlobo. Xa sithetha ngeetemplates zobuchwephesha, sibhekisela kwezo templates ezithi, ngenxa yobunzulu bazo, zibonelela ngomfanekiso osemthethweni kakhulu.
Ezi templates esizicebisile ziya kwenza kube lula kuwe ukuba usebenze njengoko zifanelekile ukuba ukwishishini okanye kwicandelo lezoqoqosho, okanye nokuba uzinikele ngakumbi ekuthengiseni kwaye kufuneka ube nezinto ezininzi ngokuncinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Izakhelo zePowerPoint zobuNgcali